Shiinaha Runjin © Krunt ™ -RM35 Soosaarida Mashiinka Jalaatada & Warshadda | Runchen
Runjin © Krunt ™ -RM35 Mashiinka Jalaatada
Waxaa loo adeegsaday soosaarka tooska ah ee jalaatada leh barafka, keli-biyoodka ama casiirka barafka-lolly.
Badeecada baarka guud waa in lagu soo saaraa lixda tallaabo ee soo socda:
1 Ku shub jalaatada koobka caaryada
2 Baarka ku shub jalaatada
3 Ku keydi jalaatada biyaha cusbada leh ee qabow -40 ℃
4 Si yar u dhalaali dusha dusha sare ee jalaatada biyaha cusbada leh ee diiran + 15 ~ 25℃
5 Ka soo saar jalaatada koobka caaryada
6 Ku daaji jalaatada mashiinka wax lagu baakadeeyo
Inta lagu guda jiro nidaamka gaadiidka laga bilaabo soo bixida iyo yareynta, koorsada shukulaatada waxaa lagu dabooli karaa dusha sare ee jalaatada. Marka jalaatada lagu dahaadho shukulaatada, miraha la qalajiyey ayaa sidoo kale lagu dabooli karaa dusha sare.
Awoodda Dufan 10%
Awoodda alaabooyinka caadiga ahi waa Budada caanaha aan dufanka lahayn 10.5%
guud ahaan 21000 ilaa 36000 saacaddii. The Sonkor (sukrose) 12.0%
awoodda wax soo saarka barafka biyaha waa qiyaastii 20% Sharoobada gulukooska 5.0%
ka hooseeya kan jalaatada. Xaqiiqda Lagu daro 0.5%
Awoodda waxay ku xiran tahay qodobo ay ka mid yihiin: Wadarta arrinta adag 38.0%
l Tirooyinka wasakhda jalaatada Biyaha 62.0%
l Tirada jalaatada ee saf kasta Wadarta 100%
Koobka caaryada ee ay sameyso jalaatada la qaboojiyey waxaa lagu xirey miiska wareega ee wareega oo lagu rido taangiga biyaha cusbada leh. Digsiga caaryada ayaa ka sameysan bir bir ah. In digsiga caaryada caadiga ah, waxaa jira 16 koob oo caaryada saf kasta, iyo tirada koobabka caaryada waa 16x126 = 2016. Dhumucda badeecada ugu badan ee u dhiganta 126 saf oo koobabka caaryada ah waa 24 mm. Weelasha caaryada ee qeexitaano kale ayaa sidoo kale la bixin karaa (eeg "qalabka ikhtiyaariga ah").
Mashiinka caaryada ee RM35 wuxuu soo saari karaa jalaatada ugu dheer oo dhererkeedu yahay 144 mm (5.67 "). Baarka ku xiran jalaatada ama jalaatada-lool waa inuu ka sareeyaa weelka caaryada ugu yaraan 30 mm (1.18 ").
Taangiga biyaha cusbada leh
Taangiga biyaha cusbada leh ee wareegsan wuxuu ka kooban yahay darbi bir bir ah oo aan labalabsaneyn oo bir leh iyo koorsada kuleylka kuleylka ayaa la bixiyaa. Lagu rakibay bambo madax-bannaan oo madax-bannaan. Jaangooyaha heerkulka ayaa loo qalabeeyay si looga hortago qalabka sii deynta inuu ku shaqeeyo heerkul aad u hooseeya. Heerkulka biyaha cusbada leh ee kulul waa inay ku ekaadaan wax ka hooseeya 25 darajo wakhti kasta si looga ilaaliyo digsiga caaryada walaaca kuleylka ee aadka u weyn.
Nidaamka wadista ugu weyn
Dhammaan shaqooyinka ugu muhiimsan waxaa lagu sameeyaa farsamaynta ay maamusho kamaradda. Hawlaha kaaliyaha iyo shaqooyinka kale ee u baahan awood xadidan waxaa xukuma nidaamka hawo cufan. Xawaaraha 35 nidaamka wuxuu noqon karaa 10 saf ilaa 30 saf daqiiqadii.
Qalabka korantada waxaa lagu rakibay bir madax banaan oo bir ah oo birta ah, oo ay ku jiraan jajabiyaha weyn, kala jebiyaha, bilowga mootada la ilaaliyo, xakameynta gudbinta si loo xakameeyo kululaynta, qalabka wax lagu beddelo si loo xakameeyo danab iyo saacad.
Hawlgallada waxaa xakameynaya guddiga xakamaynta lagu rakibay mashiinka. Dhamaan shaqooyinka waxaa xukuma PLC. Waa heer sare otomaatig ah. Gudiga xakamaynta waxaa ka mid ah badhano, tilmaamayaal, iyo bandhigyo dhijitaal ah si loo muujiyo heerkulka uumi baxa iyo heerkulka biyaha cusbada leh ee qabow. Heerkulka biyaha cusbada kulul waxaa lagu xakameynayaa si elektaroonik ah waxaana lagu soo bandhigayaa koontaroolka. Bandhig muujin kara tirada iyo lambarka ayaa bixin kara macluumaadka hawlgalka iyo ogaanshaha cudurka. Waxa kale oo jira qaylo dhaan. Haddii loo baahdo, baaxad weynwaa in la siiyaa.
Qalabka nadaafadda iyo nadiifinta
Si loo nadiifiyo loona nadiifiyo weelka caaryada ee goobta, qalab nadiifin ayaa lagu rakibay tareenka taageeraya taangiga biyaha cusbada leh. Qalabka waa in lagu xiraa biyaha, uumiyaha iyo wakiilka nadiifinta.
Nidaamka qaboojinta aasaasiga ah kuma jiraan uumi bixiye loo isticmaalo kuleylka is-weydaarsiga biyaha cusbada. Amonia waxaa loo isticmaalaa sidii qaboojiye. Nidaamka qaboojinta ee labaad ayaa ah nidaam qabow biyo cusbo leh. Biyaha cusbada leh ee qabow waxaa lagu wareejiyaa bamka axial. Taangiyada qaybinta ee biyaha cusbada leh ee qabow waxay ka samaysan yihiin bir bir ah.
Biyaha cusbada leh ee kulul waxaa lagu kululeeyaa koronto ama uumi. Kuwa la isticmaalay waa inay doortaan midkood markay dalbanayaan. Biyaha cusbada leh waxaa lagu buufiyaa wajiga dibedda ee koobka caaryada iyadoo loo marayo nidaamka biiyaha lagu buufiyo. Nidaamka barafaynta ayaa ah
kombiyuutarka la xiriirida kumbuyuutarka kontoroolka dhexe ayaa la bixin karaa si loogu beddelo PC-ga caadiga ah (eeg "qalabka ikhtiyaariga ah").
Qalabka buuxinta jalaatada caadiga ah waxaa loogu talagalay inay ahaato qalab wax lagu buuxiyo oo tiro ku jira nooca durbaanka, kaas oo loo isticmaalo in lagu buuxiyo agabyada kor ka imanaya. Waxaa ku jira biibiile tiir ah iyo madax buuxinaya. Qalabka buuxinta ee kor lagu rakibay waa la is weydaarsan karaa.
Mashiinka mashiinka bareesada
Waxay si otomaatig ah ugu xirtaa jalaatada. Raritaanka baararka gacanta ayaa lagu dhammeeyaa. Waxaa ku jira sanduuqa wax lagu keydiyo ee lagu keydiyo baararka.
Qalabka waxaa ka mid ah xamuul silsilad toos ah. 56 gacmo sii deynta leh oo leh xirmo bir ah ayaa ku jirta qalabka. Xarkaha waxay ka samaysan yihiin bir adag / bir bir ah. Siidaynta badeecada ayaa lagu dhammeeyaa socodka hoose ee gacanta sii deynta, badeecadana waxaa loo qaadayaa mashiinka wax lagu baakadeeyo. Qalabka siideynta tooska ah waa la dooran karaa (eeg "qalabka ikhtiyaariga ah").
Qalabka dahaadhka shukulaatada
Qalabka waxaa lagu rakibay tallaabada xigta ee qalabka sii deynta. Waxaa ka mid ah taangiga shukulaatada lagu kariyo iyo digsi qaata oo leh xagasho xoqan. Dhererka haanta shukulaatada waa la hagaajin karaa iyadoo loo eegayo baahida loo qabo dhererka dahaadhka shukulaatada. Haanta shukulaatada dibedda iyo bamka wareega
01 Qalab buuxinta jalaato midab leh
03 Buuxi qalabka dhaqaaqa
04 Jalaato midab midab hoose leh leh
05 Jalaato laba midab leh oo qalab buuxintiisu taagan tahay u taagan
06 Jalaato labo midab leh oo si toos ah uqaybsan aaladda buuxinta “zebra pattern”
07 Qalabka midabaynta jalaatada laba-midab leh
08 Jalaato laba midab leh oo si buuxdo u qaybsan qalab buuxintiisa
09 Qalab madax-bannaan oo hal-midab leh oo buuxiyo barafka
10 Qalabka buuxinta jalaatada leh qolofka buuxinta barafka biyaha iyo xudunta jalaatada
11 Qalabka buuxinta biyaha barafka oo midabkiisu midabkiisu yahay. Waxyaabaha ku jira saf kasta (radial) waxay ku jiraan laba midab oo kala duwan (ama saddex ama afar midab)
12 Qalab biyo buuxin ah oo laba qaybood midabkiisu toosan u qaybsan yahay
13 Qalabka buuxinta jalaatada qalinka leh qalin
14 Qalabka buuxinta barafka ee dhoobada-barafka, oo ay ku jiraan ku amraya qalabka dhaqaaqa iyo buuxinta qalabka joojinta
15 Qalalan oo dahaaran (oo leh miraha la qalajiyey sida lowska iyo nacnaca) aaladda jalaatada
16 Qalabka wax lagu buuxiyo ee loogu talagalay kareemka dareeraha sare leh ee hooseeya ee lagu daro waxyaabaha lagu daro
18 Pump station leh haanta shukulaatada ee
Awoodda 100 L, jaakad biyo ah oo leh kuleyliyaha korantada iyo shaqooyinka xakamaynta heerkulka otomaatiga ah iyo bamka shukulaatada korantada ku shaqeeya. Taangiga waxaa la siiyaa shaashad dhaqaajisa oo ku xiran tuubbada RM35.
21 Birta kaarboon ama birta kaydinta birta ahaanta ee digsiga caaryada
22 Qalab dheeri ah oo dheeri ah oo loogu talagalay wax soo saar labo sano ah
23 Beddelaha kuleylka saxanka qaboojiyaha biyaha cusbada leh
24 Qaybaha isgaarsiinta ee la xiriiraya kombuyuutarka dhexe
25 Foornada caaryada leh koobabka caaryada kala duwan iyo qaabeynta tirada isku xigta
26 Qalab farsamo ahaan loo wado si toos ah loogu sii daayo mashiinka baakadaha badan
Wadista ugu weyn 3 kW (4 HP) Bamka biyaha cusbada leh ee qabow 11 kW (14.8 HP) Bamka biyaha cusbada leh ee diirran 1.1 kW (1.5 HP) Shukulaatada qaata digsiga 0.8 kW (0.5 HP) Qalabka dahaarka qalalan 1.1 kW (1.5 HP) Mashiinka bamka faakiyuukha 2.2 kW (3 HP)
Kuleylka biyaha cusbada leh ee diirran waxaa lagu sameyn karaa kuleylka korontada ama kuleylka kuleylka. Waa in la xaqiijiyaa marka isticmaalaha dalbanayo.
Saamaynta ugu badnaan
Xiriirinta korantada ee caadiga ah 3x380 V, 50 HzAC Rated load 180 Amps
Burburiyaha ugu weyn 250 Amps
Caaryada kuleylka kuleylka sii deynta 20 KW
Caaryada kuleylka korontada sii deyneysa 101 KW Uumiga cadaadiska hoose 100 KG / H Isticmaalka ugu badan ee wax soo saarka 55 ~ 75% 150 L weelka shukulaatada 3 KW
Fiilooyinka korontada ee ugu weyn waxay la jaan qaadayaan qeexida maxalliga ah.
Isku xidhka dhuunta
Wareega tuubada ee dhuunta biyaha cusbada leh:
Qaybta ugu weyn ee hawo-qaadashada ah:
Dhexroorka tuubbada jalaatada ahi kama yarayn dhexroorka soo-saarka mashiinka dhaxanta.
Mugga biyaha cusbada leh
Isticmaalka hawo cufan
Mashiinka caadiga ah 0.9 m3/ min
Cadaadiska ugu yar ee shaqada 7 BAR Dhibcaha ugu sarreeya ee dharabka oo u dhigma cadaadiska cimilada + 5 ℃
Heerkulka shaqada caadiga ah Uumi-baxa heerkulka -45 ℃ Heerkulka biyaha cusbada leh ee qabow -40 ℃ Heerkulka biyaha cusbada kulul +20 ℃
Awoodda ugu badan ee uumi bixiye 325 KW 279000 Calorie saacaddiiba -45 ℃
Xaaladda "diyaar u ah inay shaqeyso" oo ku saabsan: 24000 kg
Miisaanka saafiga ah 16350 kg
Miisaanka guud 20500 kg
Cadadka 100 m3
Wadarta miisaanka 3200 mm
Dhererka digsiga caaryada ee dhulka 1660 mm Guud ahaan waxaa loo baahnaa meel ka bilow dhulka ilaa saqafka
Hore: Runjin © Krunt ™ -EX800 Khadka Qalalaasaha iyo Kala-goynta Ice cream
Xiga: Runjin © Krunt ™ -2000 Mashiinka Isku Darsiga Miraha
Runjin © Krunt ™ -EX800 Khadka Fiditaanka iyo Khadka ...